Top 12 nước súc miệng cho bé bố mẹ nên mua giúp bé có hàm răng chắc khỏe | Muasalebang - Muasalebang
Top 12 nước súc miệng cho bé bố mẹ nên mua giúp bé có hàm răng chắc khỏe | Muasalebang
Đang Đọc: Top 12 nước súc miệng cho bé bố mẹ nên mua giúp bé có hàm răng chắc khỏe | Muasalebang in Muasalebang
Ukunakekela impilo yomlomo wengane yakho yinto omama abaningi abayinaka kusukela izalwa noma lapho ingane inamazinyo anele. Ukwakha umkhuba wokugcina inhlanzeko yomlomo enganeni yakho kuhlale kuyinto ehamba phambili komama. Omama abaningi bacabanga ukuthi ukuvumela izingane zabo zizijwayeze ukuxubha amazinyo ngomuthi wokuxubha kwanele, kodwa kufanele futhi uvumele ingane yakho ukuthi isebenzise i-mouthwash eyengeziwe ukuze igcine amazinyo engane yakhe ehlanzekile! Namuhla kukhona nemikhiqizo eminingi eyethule imikhiqizo efanelekile ukuxazulula le nkinga.
1 Iyini i-Baby Mothwash?
1.1 1. I-Lesgo yokugeza umlomo yezingane 150ml
1.2 2. Chicky Mouthwash 250Ml – Vikela Amazinyo Engane Yakho
1.3 3. Propolinse Hello Kitty Mouthwash For Babies
1.4 4. CLINICA DENTAL RINSE KIDS SNOOPY Ukugeza umlomo 250ML
1.5 5. Ukugeza umlomo kwamazinyo kwezingane zaseJapan (T-Rex)
1.6 6. I-Valentine Kiddy Mouthwash 250ml (Izingane)
1.7 7. KODOMO KIDS Ukugeza umlomo 80ml Thailand (yezingane ezingaphezu kweminyaka engu-6 ubudala)
1.8 8. Ibhubesi Izingane zokugeza umlomo zezingane ezineminyaka engu-2 ubudala (250ml)
1.9 9. Propolis mouthwash for kids sumicare for kids
1.10 10. I-DentFatis Kids Herbal Mouthwash 250 ml
1.11 11. I-Pororo yokugeza umlomo yezingane ukuvikela amazinyo nge-apula yaseKorea ukunambitheka kwe-300ml
1.12 12. ChuChuBaby L8020 Apple Mint Probiotic Mouthwash 300ml
Iyini i-Baby Mothwash?
Ukuhlanzeka kwamazinyo ezinganeni kuhlale kuyindaba ekhathaza abazali ngoba ukuxubha akuhlanzeki ngokuphelele ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo. Ngakho-ke, kufanele kuhlanganiswe ne-mouthwash ukuhlanza i-plaque emazinyweni, ukuvimbela iphunga futhi ube nezindawo ezinhle ze-bactericidal. I-mouthwash yezingane inezithako ezinobungozi, idala iphunga elimnandi, isaphephile uma izingane ziyigwinya ngephutha. Namuhla, kukhona nabawasha imilomo abaningi abanephunga elimnandi, okuvusa isasasa ezinganeni ukuze inhlanzeko yomlomo ingabi umsebenzi onzima.
Ngenxa yalokho, abazali nabo bakhululeke kakhudlwana, banesikhathi esengeziwe sokudlala nezingane zabo futhi badale imikhuba enempilo yezingane zabo kusukela zisencane.
Xem Thêm Reviews chi tiết các dòng sữa Enfa cho trẻ bán chạy nhất thị trường | Muasalebang
1. I-Lesgo yokugeza umlomo yezingane 150ml
Ukuhlanzeka komlomo kwansuku zonke kusiza ukuhlanza amazinyo nokuqabula umlomo.
Ivimbela ukwakheka kwama-plaque, ukubola kwamazinyo, ukubola kwamazinyo.
Ukuvimbela i-gingivitis kanye nezinsini ukopha ezinganeni ezincane.
I-Lesgo Children’s Mouthwash enefomula ekhethekile yezingane ayinatshwala ngokuphelele futhi ayinaso izinongo, inhlanzeko yomlomo yansuku zonke isiza izingane zihlanze amazinyo azo, ziqabule imilomo yazo, futhi zingabangeli ubuhlungu ukuze zinakekele amazinyo azo amancane.
Isetshenziswa kanjani: thatha cishe u-5 -7ml we-Lesgo ukuze ingane yakho igaye imizuzwana engama-30, bese uyikhafula.
Kukhona ukunambitheka kwezithelo izingane ezingakhetha kuzo: ama-strawberry, amagilebhisi, amawolintshi, ama-cherry.
2. Chicky Mouthwash 250Ml – Vikela Amazinyo Engane Yakho
Ivikela amazinyo, isiza ekuvimbeleni ukubola kwamazinyo.
Iphunga elimnandi elinezithelo.
Ihloselwe izingane ezineminyaka engu-3 ubudala nangaphezulu.
Umuthi wokuxubha izingane kufanele ube nenhlanganisela yezinto ezi-3: iSodium Chloride ebulala amagciwane, iXylitol evimba ukubola kwamazinyo, neSodium Flourid esiza ukuqinisa amazinyo.
Kunezinhlobo eziningi zokunambitheka kwezithelo izingane ezingakhetha kuzo: i-apula, i-strawberry, i-orange.
Ngesikhathi esifanayo, kusiza izingane ukuthi zingasabi lapho zihlanza imilomo yazo.
Udinga ukukhetha i-mouthwash enokuqukethwe kwe-fluoride efanele ingane yakho. Izingane ezingaphansi kweminyaka emi-3 akufanele zisebenzise i-fluoride mouthwash.
3. Propolinse Hello Kitty Mouthwash For Babies
Umkhiqizo unamandla okuncibilikisa i-plaque emazinyweni.
Inomthelela ekuvimbeleni ukubola kwamazinyo, ukuvimbela iphunga.
Ukugeza umlomo kunezindawo ezinhle zokulwa namagciwane.
I-Green tea essence yondla izinsini / izinsini, ivimbela izifo zamazinyo.
Ubumnandi bemvelo obuvela ku-Xylitol busiza ukuvikela amazinyo engane yakho.
I-Propolinse Children’s Mouthwash iwumkhiqizo okhishwe etiyeni eliluhlaza nasezinyosini okuyizithako ezimbili eziyinhloko ezinezakhiwo ezibulala amagciwane ezisebenza kahle kakhulu nezondlayo.
Imikhiqizo ayitholakali kuphela ezinganeni, kodwa nakubantu abadala. I-propoline mouthwash ithandwa kakhulu ngenxa yekhwalithi yayo enhle, ukunethezeka nokuphepha. Ungaphuthelwa umkhiqizo Ukugeza umlomo kulengane eneminyaka emi-2.
4. CLINICA DENTAL RINSE KIDS SNOOPY Ukugeza umlomo 250ML
I-mouthwash yamazinyo yezingane, equkethe i-Xylitol ukuvikela amazinyo nezinsini ezinempilo.
Khipha kalula i-plaque, imfucumfucu yokudla, i-anti-cavity, ukunambitheka kwezithelo kuletha umuzwa wokusha.
Okwezingane ezineminyaka emi-3 nangaphezulu.
I-Clinica Dental Rinse Kids 250ml iwukugeza umlomo kwamazinyo wezingane, equkethe i-Xylitol ukuvikela amazinyo nezinsini ezinempilo. Khipha kalula i-plaque, imfucumfucu yokudla, vimbela ukubola kwamazinyo, kuhlanganise nama-flavour ama-strawberry namagilebhisi ukuze ulethe umuzwa wokusha enganeni yakho. Bulala amagciwane emgodini womlomo, vimbela ukwakheka kwe-asidi, ugcine amandla amazinyo.
5. Ukugeza umlomo kwamazinyo kwezingane zaseJapan (T-Rex)
I-Licorice herbal extract (Ithathwe eJapan) isiza ukubulala ngokushesha amagciwane, ucwecwe oluhlanzekile, ukuvikela izilonda emlonyeni,
I-Bee Glue, i-Illicium verum (engeniswe isuka e-Korea) isiza ukuhlanza umlomo, ukulwa nephunga elibi, kanye ne-caries ngokuphumelelayo.
I-T-rex herbal baby dental mouthwash iwumkhiqizo oqondiswe ngqo izingane ngoba ayinawo amakhemikhali (Safe to swallow) futhi ihlolwe ngokucophelela nguMnyango Wezempilo.
Isiza ukuqinisa amazinyo, uqweqwe lwawo oluhlanzekile futhi uvimbele ngempumelelo ukubola kwamazinyo Vele ugeze umlomo wengane yakho kabili ngosuku: Sebenzisa ngaphambi kokulala nangemuva kokudla kwasekuseni ukuze usize ingane yakho ibe namazinyo aqinile namuhla.
6. I-Valentine Kiddy Mouthwash 250ml (Izingane)
Gcina umlomo wakho nokuphefumula kuqabula isikhathi eside.
Yelapha ngempumelelo izilonda zomdlavuza futhi uvimbele izilonda zomdlavuza ukuthi zingaphindeki.
Ukuphulukiswa ngokushesha ngemva kokukhipha izinyo.
Imigodi, i-gingivitis ebangela ukopha izinsini: ukusiza amazinyo aqinile, izinsini ezinempilo.
Vimbela ukwakheka koqweqwe emazinyweni: gcina amazinyo amhlophe.
I-Valentine Kiddy mouthwash iyinhlanganisela ye-European standard silver Nano namafutha abalulekile emvelo ukusiza ukubulala nokuvimbela amagciwane, amagciwane kanye nesikhunta ekukhuleni.
Yelapha ngempumelelo izilonda zomdlavuza futhi uvimbele izilonda zomdlavuza ukuthi zingaphindeki. Ukuphulukiswa ngokushesha ngemva kokukhipha izinyo.
Imigodi, i-gingivitis ebangela ukopha izinsini: ukusiza amazinyo aqinile, izinsini ezinempilo. Vimbela ukwakheka koqweqwe emazinyweni: gcina amazinyo amhlophe.
7. KODOMO KIDS Ukugeza umlomo 80ml Thailand (yezingane ezingaphezu kweminyaka engu-6 ubudala)
Ukugeza umlomo okuthambile okunambitheka izithelo ngaphandle kotshwala ezinganeni
Isiza ukunakekela koqweqwe lwawo kanye nemifantu isixubho esingakwazi ukufinyelela kuso, ukunakekela amazinyo aphelele ezigabeni zokuqala zokuphuma kwamazinyo.
Iqukethe i-xylitol, i-sweetener engeyona i-cavitation esikhundleni sikashukela
Isiza ekunciphiseni ukunqwabelana kwamagciwane ayimbangela yezinkinga zokuphefumula okubi, ukunikeza ingane yakho umoya omusha
I-mouthwash engenatshwala engenatshwala yezingane (ngaphezulu kweminyaka engu-6 ubudala)
Iqukethe i-xylitol, i-sweetener engeyona i-cavitation ebamba ushukela esiza ukunciphisa ukunqwabelana kwamagciwane abangela izinkinga zokuphefumula okubi, enikeza ingane yakho umoya omusha.
8. Ibhubesi Izingane zokugeza umlomo zezingane ezineminyaka engu-2 ubudala (250ml)
I-Lion mouthwash ivimbela ukwenzeka nokukhula okubangela ukubola kwamazinyo, umoya omubi kanye ne-endodonitis.
Vimbela i-gingivitis ngesithako se-bactericidal CPC (cetyl pyridinim chloride) esiza ukuvimbela ukukhula kwamagciwane e-pathogenic isikhathi eside.
Ngezithako ezihlanganiswe ne-xylitol (i-sweetener yemvelo) ukwenza amazinyo abe mhlophe, gcina umoya uhlanzekile, futhi luvimbele ukukhula nokwakheka kwamagciwane adala uqweqwe lwesikhumba nokulimala emazinyweni.
Umkhiqizo awunawo utshwala, kanye ne-xylitol ilungele izingane futhi isiza ukwehlisa ukucasuka. Ukunambitheka kwamasitrobheli amnandi, okungababayo kwenza izingane zibe nentshisekelo enkulu ekugangeni.
9. Propolis mouthwash for kids sumicare for kids
Ukukhishwa kwe-propolis akusizi nje kuphela ukubulala amagciwane kuyo yonke indawo yomlomo, kodwa futhi kuthuthukisa impilo yezinsini, kunciphisa i-gingivitis kanye nezinsini ezophayo ezinganeni.
Isiza ukunciphisa ukwakheka kwama-plaque ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo.
Isiza ukuqinisa izinsini, ukunciphisa ukopha kwezinsini, i-gingivitis, izilonda zomphimbo kanye nezilonda emlonyeni.
Sebenzisa inhlanzeko yomlomo nsuku zonke, gcina umoya wakho uhlanzekile.
I-Sumicare Children’s Mouthwash enefomula ephakeme kakhulu eyenzelwe izingane, ayiqukethe utshwala, ayintinyeli. I-Sumicare Children’s Mouthwash iphephe ngokuphelele ukuthi izingane zingayisebenzisa futhi ibizwa ngokuthi “Ama-Antibiotics Emvelo”. Imikhiqizo yokunakekelwa ngomlomo okukhethekile yezingane. Umkhiqizo uhlangabezana nezindinganiso zoMnyango Wokuphepha Kokudla – Umnyango Wezempilo waseVietnam.
Ukukhishwa kwe-propolis kusiza ukubulala amagciwane kuyo yonke indawo yomlomo, kodwa futhi kuthuthukisa impilo yezinsini, kukhawulele i-gingivitis kanye nezinsini ezophayo ezinganeni, kusiza ekunciphiseni ukwakheka kwama-plaque ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo.
10. I-DentFatis Kids Herbal Mouthwash 250 ml
Engeza izithako zokulwa nokuvuvukala ezivela emvelweni njenge-Chamomile, Hoa Hoe.
Ukuze izingane zisebenzise nsuku zonke ngokumelene nokubola kwamazinyo, ukuqeda iphunga, ukuvimbela izifo zomlomo nezokuphefumula.
I-DentFatis ayinabo Utshwala – iphephile ezinganeni.
I-DentFatis Kids Mouthwash nge-Xilitol – i-ejenti enconyelwa udokotela wamazinyo evimbela imigodi.
Hlanza umlomo, susa umoya omubi, wenze umoya ube musha. I-tartar isiza ekunciphiseni ukubola kwamazinyo, isiza amazinyo ukuba aqine, abe mhlophe ngokwemvelo, isiza ekugcineni amazinyo nomlomo kuhlanzekile, inomthelela ekunciphiseni amagciwane, okufaneleka lapho isetshenziselwa izingane ngemva kokuhlinzwa noma ukulahlekelwa amazinyo. , ukushintshwa kwamazinyo, i-gingivitis, izilonda emlonyeni.
11. I-Pororo yokugeza umlomo yezingane ukuvikela amazinyo nge-apula yaseKorea ukunambitheka kwe-300ml
Vikela amazinyo kumagciwane ayingozi
Vimbela ukubola kwamazinyo
Kuphephile ukuthi izingane zisetshenziswe
Ukunambitheka kwe-apula okusha kwenza izingane zijabulele ukugoba
Iphunga le-apula lezingane le-Pororo lisiza izingane ukuba zibe nesithakazelo ekuhlanzekeni komlomo kwansuku zonke. Ihlanza amagciwane omlomo, i-plaque emazinyweni, isiza amazinyo ukuthi ahlale eqinile, umoya omusha usuku lonke. Isiza ukuvikela izifo zamazinyo, izinsini nomlomo. Imikhiqizo ye-Pororo isijwayelekile kubathengi emazweni amaningi emhlabeni wonke ngenxa yekhwalithi eqinisekisiwe nemiklamo emihle.
12. ChuChuBaby L8020 Apple Mint Probiotic Mouthwash 300ml
Ibulala amagciwane angama-99.9% abangela ukubola kwamazinyo kanye no-100% wamagciwane abangela isifo se-periodontal.
Ibhalansi yamagciwane endaweni yomlomo (ukwandisa amabhaktheriya anenzuzo nokunciphisa amagciwane ayingozi)
Thuthukisa i-pH yendawo yomlomo isuke “ku-Acid” iye “ku-Neutral”
Ivimbela uqweqwe lwamazinyo ekubhujisweni ama-asidi.
Qinisekisa indawo yomlomo enempilo nehlanzekile.
I-ChuChuBaby L8020 L8020 Apple Mint Probiotic Mouthwash 300ml iwumkhiqizo odume kakhulu wokunakekelwa komlomo kwabesifazane abakhulelwe eJapan.
Ibulala amagciwane angama-99.9% abangela ukubola kwamazinyo kanye no-100% wamagciwane abangela isifo se-periodontal. Linganisa amabhaktheriya endaweni yomlomo (ukwandisa amagciwane anenzuzo nokunciphisa amagciwane ayingozi) Yenza ngcono i-pH yendawo yomlomo isuke ku-“Acid” iye “ku-Neutral”. Ivimbela uqweqwe lwamazinyo ekubhujisweni ama-asidi. Qinisekisa indawo yomlomo enempilo nehlanzekile.
Ngenhla kunohlu lwemikhiqizo engu-12 mayelana nokugeza uMlomo Wezingane. Sethemba ukuthi isihloko sizoba isiphakamiso esiwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa, hlaziya, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.
Top 8 Bộ phim Zombie hay, hấp dẫn được tìm kiếm nhiều nhất | Muasalebang
Galaxy Note 9 512GB Hàn Quốc cũ Chính Hãng Trả Góp 0% | Muasalebang
Đánh Giá Tổng Quan Điện Thoại Samsung Galaxy J5 Prime | Muasalebang